UYallunder ungumculi onakho konke | Scrolla Izindaba
UYallunder ungumculi onakho konke
Ungumculi oqeqeshwe kahle, umbhali wezingoma onezwi elinomphefumulo wengelosi – futhi muhle ngokumangalisayo.
Isihlabani esiseNingizimu Afrika esikhulayo se-Afro-soul uYallunder uyikho konke.
Manje usekhiphe i-EP yakhe yokuqala ethi “Uthando Lwam”.
Ingoma yisithupha ye-EP isitshela ngobuhlungu nenjabulo yothando.
Isihloko saleliculo sithi “Uthando Lwam” ucula uthi:
“… Amandla am ayophel’endleleni / Ubuhle bam buyosala nobusha bam / … Uthando lwam luzongifikisa kuwe / Uthando lwam luzongigcina kuwe …”
Ku-EP uYallunder usizwa nguSjava, NueSam no-Inno Motong.